Fampirantiana orinasa mandrisika ny tanora hiditra amin’ny sehatra fandraharahana ity hetsika ity. Tompon’antoka ny fikambanana Jeune Chambre International (JCI) izay nampirisika ireo tanora mpandraharaha hanana traikefa matotra amin’ny fampiroboroboana ny orinasany. Tsiahivina fa fikambanana eto Antananarivo ny JCI ary manosika tanteraka ny tanora hisehatra amin’ny fandraharahana. Hetsika mandritra ny 2 andro ary hisy ny fampirantiana sy fampiofanana ary ny fifampizarana traikefa hanohanana ny tanora manana tetikasa rehetra. Ilaina hatrany hetsika sahala amin’itony satria iaraha-mahalala ny fitotonganan’ny orinasa Malagasy ka ny tanora no antenaina hanainga izany. Fanararaotana hitadiavana famatsiam-bola ihany koa ny hetsika sahala amin’itony satria mampiranty sy mampahafantatra ny fahaiza-manaony ireo tanora ireo. Nanamarika ity hetsika ity ihany koa ny fampisehoana tetikasa ananan’ireo tanora manan-kilema.